Mashandisiro aungaita Netflix pakuvhuraSUSE | Linux Vakapindwa muropa
Hupenyu hunoshamisira dzimwe nguva, uye kana asiri iwo vashandisi veLinux vanoda kutaura kudaro shandisa Netflix uye havafanirwe kuzviita muchimiro, izvi kunyangwe hazvo izvo iyo kutenderera kwevhidhiyo inovimba neiyo penguin inoshanda sisitimu yezvivakwa zvayo. Luckily thanks to mwenje wepombi Izvo zvinokwanisika kuwana musanganiswa uyo unoshanda zvakakwana kuti ugone kunakidzwa neimwe yeyeredzi masevhisi pawebhu mumakore achangopfuura.
Ehezve, sekuziva kwedu zvakanaka muLinux zvinhu zvinosiyana zvishoma pakati pekugovera, saka ikozvino ngatione maitiro ekushandisa Netflix kubva kuvhuraSUSE, iyo sechiyero chekutanga isu tichafanira kuisa iyo yambotaurwa Pipelight. Uye chokwadi chiri nyore kwazvo kuvonga kune yakavhurikaSUSE webhu inosimudza, iyo inotibvumidza isu kusarudza vhezheni yeiyi distro, iyo package yatiri kutsvaga, uye kuenderera nekuisirwa kwayo. Saka, ngatiitei gadza Pipelight.
Zvino tinoda chinja iyo YeMushandisi Agent (UA) tambo, inova ndiyo inoratidza bhurawuza yatinoshandisa kumasevhisi anochida. Uye yeuka, Netflix haina rutsigiro rwemuno muLinux saka tinofanirwa kukuita kuti utende kuti tinoshandisa imwe chikuva kana tichiiwana. Naizvozvo, isu tinofanirwa kurodha pasi chishandiso chinotibvumidza kuti tishandure Mushandisi Wevashandisi uye iyo kuwedzera vanoita zvishamiso nezvinhu izvi.
Panguva yeChrome / Chromium pane izvi:
Chero zvazvingava, isu tinofanirwa kusiya iyi UA String mubrowser yedu:
Ndizvozvo, uye tinogona nakidzwa neNetflix pane yakavhurikaSUSE.
Mamwe mashoko - Pipelight, ndiyo inoshanda nzira yekushandisa Netflix paLinux , Netflix inogona kukurumidza kusvika paLinux zviri pamutemo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » Mashandisiro aungaita Netflix pane yakavhurikaSUSE
Maitiro ekufambisa yedu Dropbox dhairekitori kune yekunze dhiraivha muUbuntu